Ngo-2021 iHoroscope yoMhlaza - Umhlaza
Ngo-2021 iHoroscope yoMhlaza
IHoroscope yoNyaka yoMhlaza ka-2021 x
Umoya:Umsebenzi, Ukwahlukana, iNguqu, Amandla.
Iindawo zokundwendwela emva kobhubhane:eMadagascar, eTshayina, eMexico.
Izinto onokuzifunda:Ifilosofi, iKite Surfing, i-Ice Sculpting.
Iitoni zoxinzelelo ezithi unyaka wokugqibela uziswe kumqolo wakho sele uza kukhululwa, kwaye nangona inkqubo inokuba rhabaxa entliziyweni, iyimfuneko kwaye ibuyisela amandla akho emva kwexesha. Unyaka ka-2021 umalunga namatyala, izithunzi kunye nemisila yakudala eyayikwenza wonwabe kodwa ingasasebenzi ngenjongo. Uza kufumana izinto ezininzi eziphelelwe lixesha kunye namaqhina eemvakalelo angenaso isiseko esiqinileyo aya kuqhawuka. Eyona nto ibalulekileyo kwezi nyanga zilandelayo akuthatheli mboleko amatsha okanye wenze amatyala ngekamva lakho ngaphandle kokuba ayimfuneko ukwenza utshintsho olukhulu ebomini bakho.
Lifikile ixesha lokuba uzibeke kuqala kwaye ufike phezulu kuluhlu lwakho oluphambili. Ngoluhlu lwakho lwangoku lwemikhwa kunye noxinzelelo lwezinto ozilindeleyo oye wazama ukuhlangabezana nazo ngoku, oku kuya kuba ngumsebenzi onzima, kodwa umlinganiselo omnye wawo wonke umzamo. Qala ngezinto ezincinci ukuze ungavumeli uxinzelelo kunye neengxabano zithathe. Kufuneka uhlale ucwangcisiwe kwaye unxibelelana nemicimbi yesiqhelo yemihla ngemihla efuna ingqwalasela ethe gqolo, ngelixa ukhetha ukungalibazisi okanye ukuhlala ubambekile de kufike ixesha lokuqhawuka. Kuninzi onokuthi ukwenzele kona kule ndawo umi kuyo ngoku.
Ukuphela kukaMeyi kuzisa ukukhanya kwenyanga kwindlu yakho yesithandathu, indlu yomsebenzi onzima, kwaye inkqubo yakho iya kufuna ingqalelo eninzi. Gcina ukhumbula ukuba le yincopho ye-iceberg kwaye ibonisa umoya weenyanga ezimbalwa ngaphambi nasemva komsitho. Ukuzinyamekela yeyona nto ibalulekileyo, kunye nendlela enempilo yokuthatha kwakho ivithamin kunye nokuzilolonga rhoqo kwemihla ngemihla. I-physiology ithetha nawe ngeendlela ezingaqhelekanga kwaye ukuba uqala ukufuna izisombululo kunye nokugqiba imigca engekakulungeli intliziyo yakho, inokuba phantsi koxinzelelo olukhulu kwaye ikwenze ube sesichengeni. Yehlisa isantya kwaye wenze ngokwemfuno yeemvakalelo ngalo mzuzu. Unexesha layo yonke into onqwenela ukuyizuza.
Unethuba lokuthatha amandla akho umva, uphakame, uphakamise umoya wakho njengoko usamkela umsindo kunye nenyani yesimo sokwenziwa okufumene kumanzi amileyo. Lo nyaka licandelo lamathuba angaqhelekanga kwaye amangalisayo anokuthi akutshayele ezinyaweni, akukhuphele kude kumzila ongene kuwo, akutyhale ngaphaya komgca. Ukucinga ngaphandle kwebhokisi kuya kuxabiswa kwaye kube luncedo kakhulu kwiimeko ezihlala zimile kwaye zingashukumi. Ukhululekile ukuba uphume kwindawo yakho yokuthuthuzela kwaye ukhusele imida yakho yobuqu endleleni.
Ukuphela kuka-Epreli kunye nenyanga yonke kaMeyi zibaluleke kakhulu kwiphysiology yakho. Apho kuthathwa khona inkululeko yobuqu, imiba emininzi yengqondo iya kuvela, kwaye iingxaki zoxinzelelo lwegazi kunye nezintso zinokwenzeka. Jonga imeko yakho yonke kodwa uqaphele ukuba unamandla okutshintsha amazwe abangelwa kukungalingani ngokweemvakalelo kunye nendlela otyhala ngayo iimvakalelo ezingalunganga. Lixesha lokuba wakhe kwaye ugxile kwi-heath kunye neemfuno zakho zokwenyani zomzimba. Oku akufuneki kuphela ulwazi oluninzi kunye nomzamo wemihla ngemihla, kodwa ikwathetha ngesidingo sakho sokunxibelelana namazwi akho angaphakathi, iminqweno, kunye neyona nto uyiphetheyo ngaphakathi.
Ukuzinikela kwakho okuqhelekileyo kwimicimbi yeemvakalelo kunye nemeko yekhaya lakho akufuneki kutshintshe kakhulu xa kufikwa kunxibelelwano olusondeleyo kunye namalungu osapho, nangona ubudlelwane bezothando buthanda ukuqhekeka kwaye bubeke ubunzima obuninzi kwimeko yentliziyo yakho. Isiqingatha sokuqala sonyaka asithandeki kangako kumabali othando alula. Nje ukuba uthuli luzinze kwaye ulwamkele utshintsho oluyimfuneko, uya kufumanisa ukuba eyona nto uyidingayo iqala ngokuhlobisa okanye ukutshintsha ikhaya lakho. Olu tshintsho luseta isiseko esitsha salo lonke unxibelelwano lweemvakalelo oya kulwenza ekupheleni konyaka.
Inyanga kaJuni ikhupha iVenus kumqondiso wakho, okwenza kube nzima ukuba unganikeli inkululeko yeemvakalelo zakho ukuba ibe yile nto bayiyo. Eli lixesha apho amabali othando ahlukeneyo nangaqhelekanga anokothusa, lawo anokuthi angabinanto yakwenza nokhetho olufanelekileyo nolusengqiqweni. Qinisekisa ukuba izinyanzeliso zakho zokuziphatha zikhona kwaye ugcine imeko yakho icacile kwaye iyinyani ukuze ungaqhawuki phakathi kwezidingo zakho ezichasayo. Thatha umngcipheko wokuba intliziyo yakho ibize kodwa ugcine ulindelo lwakho lusezantsi kwaye ubone injongo yonxibelelwano ngalunye olusebenzela ukwenzeka kwakho kunye nentliziyo yakho ukuba icoceke.
Amandla amaninzi kufuneka akhululwe kumsebenzi wokudala njengoko intwasahlobo ifika ekupheleni kwayo, kodwa kunokwenzeka ukuba ukukhungatheka kuya kukhula endaweni yoko. Ukuba ukwindawo engaxhaswayo apho ungenakho ukubonisa amandla akho apheleleyo kunye neetalente, khangela izisombululo ezingcono kwenye indawo. Kungcono ukuzama izinto ezininzi ezintsha nokuba zibonakala zingathembisi, kunokuhlala ubambekile kwindawo engazisi sithembiso senjongo okanye ulonwabo. Nika ingqalelo kumatyala amadala kwaye uzame ukungathathi naziphi na iimali-mboleko ezintsha. Kungcono ukonga, ubuyise, kwaye usebenzise kuphela oko unako kunokubeka ubunzima kwikamva lakho xa umkhombandlela wakho ungacacanga.
Khetha Uphawu Aries Khetha Uphawu Iiary Umhlaza